Ahịa Survey Burnout | Martech Zone
Nyocha bụ ụzọ dị oke egwu iji weghara ozi dị mkpa na atụmanya gị na ndị ahịa gị, mana ha nwekwara ike ịbụ ngwaọrụ a na-eji eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi ma na-enye data nke na-eme ka azụmahịa gị na-ezighi ezi. Dị ka ihe atụ dị mfe, ọ bụrụ na m bụ azụmaahịa ma jụọ m otu m ga - esi meziwanye weebụsaịtị m, ana m esetịpụ atụmanya na onye na - eme nyocha ahụ na enwere ihe a ga - eme iji melite weebụsaịtị… mgbe n'ezie weebụsaịtị nwere ike na-eme nke ọma.
Ghara ikwu eziokwu na onye ọ bụla yiri ka ọ na-agba mbọ ịba ndị ahịa na azụmaahịa maka data taa iji mepee mmemme nkewa ma lekwasị anya na nkenke ka mma. The iju mmiri nke na-arịọ na-n'ezie na-enwe mmetụta na ụlọ ọrụ… nnyocha na-arụ na-agba ọsọ ọsọ na-enwe ndidi.
Ndị zaghachiri na nyocha a mere n'oge na-adịbeghị anya (ọ ga-abụrịrị ezigbo egwuregwu n'ebe ahụ) kwuru na nyocha dị ogologo, nke onwe, ma na-adịghị mma. Companieslọ ọrụ ndị ọzọ na-arịọ ndị ahịa ka ha mejupụta ha karịa ka ọ bụla. Site na Zendesk Infographic: Nzaghachi ike ọgwụgwụ
Kedu ihe ndị ahịa ahịa kwesịrị ime? Jide omume kama ịjụ maka ozi n'ebe enwere ike. Belata ugboro ole nyocha a na-eme ma belata ọnụ ọgụgụ ajụjụ. Gbalịa ịmepụta nyocha ebe ị na-atụgharị ajụjụ n'otu oge ma jiri azịza dị mfe kama ịjụ maka ogologo ozi.
Tags: nyocha ndị ahịanzaghachinjikwa nzaghachinnyocha e merenyocha
Stipple: Ihe ọgụgụ na mmekọrịta mmekọrịta
Jenụwarị 12, 2013 na 12:23 PM
Nzaghachi onye ọrụ dị ezigbo mkpa, mana ọ na-esiri gị ike inweta. Ọ ga-akara m mma ịmụ banyere arụmọrụ saịtị site na nyocha karịa site na ire ahịa, ma ọ bụ enweghị ya.
Jenụwarị 14, 2013 na 9:37 PM
Tụọ ihe ndị mmadụ na-eme n'ezie - ọ bụghị ihe ha chere na ha na-eme mgbe ị na-eme nnyocha nyocha.